Waa Go'aankaaga Calendar
Doodda VOA ee Nairobi
Waa Go'aankaaga: Dhallinyarada iyo Saaxiibtinimada Barnaamijka Waa Go'aankaaga ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay sida saaxiibadu ay raad wanaagsan iyo mud xunba iskugu yeeshaan. Waxaad ku maqli doontaan warbiixino kala duwan.
Waa Go'aankaaga: Kulanka Dhallinyarada ee Nairobi
Sabtidii ay bisha August ku beegnayd 29-ka waxa magaalada Nairobi ka dhacay kulan lagaga hadlayey loolanka ay dalalka Geeska Afrika kala kulmaan ururka Alshabab, kulankaas oo ay ka qeyb galeen khubaro iyo siyaasiyiin Soomaali iyo Kenya iskugu jira.
Waa Go'aankaaga: Dhallinyarada Ku-noqoshada Dugsiyada Barnaamijka Waa Go'aankaaga ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay Dhallinyarada iyo marka fasaxu dhamaado ee iskuulada lagu noqonayo, waxaana marti noogu ah Jibriil Maxamed oo bare ka ah Jaamacadda Ohio State Univeristy.
Waa Go'aankaaga: Dhallinyarada iyo Shirka YALI Barnaamijka Waa Go'aankaga ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay shir uu madaxweynaha Maraykanka, Barack Obama uu la qaatay 500 oo hogaamiyeyaal da'yar oo reer Afrika ah
Waa Go'aankaaga: Dhallinyarada iyo Is-fallisaadda Ganacsiga Barnaamijka Waa Go'aankaaga ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Ganacsade Cabdiqani Sheekh Cali Diini, waxaana su'aalo weydiin doona qaar ka mid ah dhageysteyaasha VOA
Waa Go'aankaaga: Dhalinyarada iyo Jadwalka Shaqada Ramadanka Barnaamijka Waa Go'aankaaga ee toddobaadkan waxa marti ku ah Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan (Cabkoos) oo magaalada Minneapolis ku leh makhaayadaha laga cunteeyo, waxana uu ka jawaabayaa su'aalaha qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA
Waa Go'aankaaga: Dhalinyarada Gobollada Dhexe
Waa Go'aankaaga: Dhallinyarada iyo Ramadanta Q.2aad Barnaamijka Dhallinyarada iyo Ramadanta waxa uu toddobaadkana aad ku maqli doontaan waayaha kala duwan ee Soomaalida qurbaha ku nooli ay kala kulmaan Ramadanta. Sidoo kale, waxaad ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ka yimid Somalia
Waa Go'aankaaga: Dhallinyarada iyo Bisha Ramadan Barnaamijka Waa Go'aankaaga ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, Imaamka Masjidka Daarul Hijrah, gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka